Ọtụtụ mbibi na mkpụpụ n'ihi oke mmiri ozuzo | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Idei mmiri
N'iburu amụma ihu igwe emere na ụbọchị ndị a, mpaghara iri na otu nke Spanish Emeela ka ha nọrọ na nche n'ihi oke mmiri ozuzo na oké ifufe. Karịsịa, ha siri ike na Cádiz, Malaga, Valencia na Tarragona thedọ aka na ntị niile enyere na ọkwa "odo", nke pụtara ọghọm n'ihi oke mmiri ozuzo. Agbanyeghị, emeela mkpọrịdọ na Cádiz, Malaga, Tarragona na Valencia ka ha bụrụ “oroma”, na-egosi ihe egwu dị mkpa karị.
Na Cádiz, oke mmiri ozuzo na-eme ka okporo ụzọ sie ike n'ọtụtụ okporo ụzọ na idei mmiri ahụ na-akpata ọtụtụ mbibi nke manyere ịcha ọtụtụ ụzọ na netwọkụ.
A chọtawo nwoke dị afọ 54 gafere na obodo Conil de la Frontera (Cádiz) mgbe ọnwuchara ya na traktọ ebe ọ na-arụ ọrụ. Ọ nọ n’otu ugbo mgbe ọ tọrọ atọ. Onye isi obodo nke Conil, Juan Bermúdez, na-ekwu na ihe omume a enweghị ihe jikọrọ ya na ide mmiri na-ewere ọnọdụ n'obodo ahụ.
Nwanyị na-eso ya n'akụkụ nke ọzọ okụrede mgbe ụgbọala nke ọ nọ na ya nọ na-asachapụ. Nwanyị a na-eme njem n’obodo Sant Llorenç d’Hortons na Barcelona, ​​oke mmiri ozuzo a butere ide mmiri nke bupụrụ ọtụtụ ụgbọ ala. Otu nwoke ya na ya so wee pụọ n'ụgbọ ahụ mgbe, ịkụ osisi, o jidere alaka wee pụọ na windo ahụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-esonye na ịchọ nwanyị a. N'ime ha anyị hụrụ ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ, helikọpta, ndị otu otu ugwu pụrụ iche na ọrụ n'okpuru mmiri na Canine Search Group, yana Mossos d'Esquadra, ndị ọrụ ime obodo na ndị ọrụ afọ ofufo na-echebe obodo.
E kewapụkwala ọtụtụ narị mmadụ n'ihi ide mmiri ahụ na Vejer (Cádiz). Ndị ọrụ nchekwa na ndị mberede enwebeghị ike ịme ihe ọfụma ma rụọkwa ọrụ iji nyere ndị bi ebe ahụ aka ka ha mepee ụlọ egwuregwu nke ime obodo ka ha wee nwee ike ijere ezinụlọ ndị hapụrụ ụlọ ha ozi.
N’ikpeazụ, na Murcia, anyị hụrụ na ụfọdụ ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ agbapụtala otu nwoke ụgbọala ya tọrọ n’okporo ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Nnukwu mbibi na mwepụ n'ihi oke mmiri ozuzo
Ifufe ole kpụrụ na 2016?